ISan Juan de Gaztelugatxe, indawo enhle yokubaleka | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka
ISan Juan de Gaztelugatxe itholakala edolobheni laseBiscayan iBermeo, Ezweni laseBasque. Ingenye yalezo zindawo ezigqama ngobuhle bayo bemvelo obubabazekayo, indawo ebukeka inkulu futhi ingaphelelwa yisikhathi. Kuyindumezulu yomlando ukuthi kukhethwe ukuthi kumelwe iDragonstone Castle ochungechungeni oludumile lwe 'Game of Thrones'. Kepha ngale kochungechunge lwemfashini, le ndawo yayivele iyi-enclave yezivakashi esasingakwazi ukuyiphuthelwa lapho sivakashele izwe laseBasque.
Kulokhu okuthunyelwe sizobona ungafika kanjani eSan Juan de Gaztelugatxe, okuzophinde kuhanjwe kakhulu ngenxa yodumo lolu chungechunge olumlethele lona. Sizokwazi okuthe xaxa mayelana nokuthi yini esingayibona kuleli dwala elikhulu nasezindaweni ezilizungezile, ukuze ukuvakasha kuphele ngokuphelele.
1 Ungafika kanjani eSan Juan de Gaztelugatxe
2 Ukuvakashela iSan Juan de Gaztelugatxe
3 I-Dragonstone Ezweni laseBasque
4 Ukuvakasha okuseduze
Ungafika kanjani eSan Juan de Gaztelugatxe
ISan Juan de Gaztelugatxe ingafinyelelwa kusuka eBermeo, ku Umgwaqo uBermeo noBaquio, iBI-631. Lo mzila mfushane, cishe amakhilomitha ayi-9, yize kungumgwaqo wesibili, ngakho-ke kuthatha cishe imizuzu engamashumi amabili. Idolobha eliseduzane yiBilbao, uma sifuna ukufika ngendiza, bese siya eSan Juan de Gaztelugatxe. Kukhona amabhasi noma singahamba ngomgwaqo ofanayo, i-BI-631, uma sihamba ngemoto.
Uma kukhulunywa ngokupaka kunezeluleko ezahlukahlukene, ngoba imvamisa ungapaka eduze kwebhuloho, kepha kwesinye isikhathi azishiyi, ngakho-ke kufanele upake kude, njengekhilomitha. Noma kunjalo, ukuhamba kungenziwa yinoma ngubani futhi kufanele ngempela. Lapho sivakashele le ndawo kufanele futhi sinake iqiniso lokuthi ku- ehlobo le ndawo imatasa impela futhi icindezela kancane ukwedlula ekwindla noma entwasahlobo. Ubusika akusisona isikhathi esihle futhi ngenxa yesimo sezulu esibi olwandle.
Ukuvakashela iSan Juan de Gaztelugatxe
ISan Juan de Gaztelugatxe isiqhingi esixhunyaniswe nezwekazi yi ibhuloho labahamba ngezinyawo elinemengamo yamatshe enikeza indlela yokuhamba Lokho kuholela ekugqashukeni kwesiqhingi, yebo, ngemuva kokuqansa ngaphezu kwezitebhisi ezingama-200. Labo abangekho esimweni esihle kangako bangavele nje bakuthathe kalula, ngoba kuvamile ukuma ukubabaza ubuhle bendawo ezungezile. Lapho ufika ekugcineni kwezitebhisi, ungabeka unyawo lwakho kulokho okucatshangwa ukuthi uSanta John uMbhapathizi akushiye lapho. Uma ufika phezulu, uzothola i-hermitage ebekelwe iDegollación de San Juan, esukela ngaphambi kwekhulu le-XNUMX leminyaka. Isiko likhombisa ukuthi uma ufika phezulu kufanele ushaye insimbi kathathu bese wenza isifiso. Ngaphandle kokungabaza yindawo yomlando egcwele izindaba namasiko.
I-Dragonstone Ezweni laseBasque
Uma ungumlandeli wochungechunge lwe-'Game of Thrones ', le ndawo ngokuqinisekile izwakala ijwayelekile kuwe, naphezu kokuhlelwa kwekhompyutha. Izindawo eziningi ezweni laseBasque zikhethelwe adubule ngesizini yesikhombisa futhi amele iDragonstone. Enye yalezi zindawo ibhishi laseZumaia, futhi nogu lwaseBasque, kanti esinye isiqhingi saseSan Juan de Gaztelugatxe, esimele indawo lapho kunenqaba khona, sihlangana ochungechungeni nendawo yolwandle, okusho ukuthi bendawonye futhi yilapho iDaenerys ifika khona ngesizini edlule. Namuhla kungesinye isizathu sokuvakashela le ndawo yezwe laseBasque, hhayi nje ngobuhle namasiko alo, kepha futhi ngoba yindawo lapho kuthwetshulwe khona uchungechunge lwezinkolelo zalo mzuzu. Abalandeli bomdlalo owuchungechunge, okungebona abambalwa, bazokujabulela ukuphinda bakhulule izigcawu zalolu chungechunge.
Yize le ndawo ebekiwe ikude nakho konke, iqiniso ukuthi ngemoto singafinyelela amaphuzu amaningi athakazelisayo ngesikhathi esifushane. TO ngamakhilomitha angama-35 kuphela kunedolobha laseBilbao. Kuleli dolobha singajabulela iGuggenheim Museum, iMuseum of Fine Arts, iPlaza Nueva noma i-Old Town yedolobha. Yindawo ekahle yokuhlala, ngoba sizoba nesipho esihle. Ngakolunye uhlangothi, singaya eBermeo, okuyindawo engamakhilomitha ayi-10 ukusuka eSan Juan de Gaztelugatxe. Leli dolobha elisogwini lithule futhi lihle kakhulu, ngaphezu kokuba seduze nolwandle oludumile iMundaca kanye ne-Urdaibai Biosphere Reserve, indawo yokugcina yemvelo kanye nolwandle olungomunye umhlaba ongangezwa ohambweni lwethu.
Abalandeli be'Game of Thrones 'abafike ezweni laseBasque ngeke bakwazi ukuphuthelwa okunye ukuvakashelwa. Sibhekisa ku- Ibhishi laseZumaya, lapho kwaqoshwa khona enye indawo yaseDragonstone. Uhambo lokubona izilungiselelo zalolu chungechunge oludumile lomhlaba luyaphothulwa ngaleyo ndlela. Ngaphezu kwalokho, lolu lolwandle lungenye indawo enhle kakhulu, enendawo enamadwala engashiyi muntu engenandaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » ISan Juan de Gaztelugatxe, uhambo oluhle lokubaleka